စည်းလုံးကျပါ။ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » စည်းလုံးကျပါ။
Posted by chityimhtoo on Jun 9, 2012 in News | 12 comments
ကျုပ်တို့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ စံနစ်တကျ ကြိုတင်ကြံစည်ထားတဲ့ လုပ်ကြံမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်။
ဘင်္ဂါလီကိစ္စကို အစိုးရက ခပ်ပေါ့ပေါ့သဘောထားခဲ့သလို၊ အတိုက်အခံတွေကလည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်ခဲ့တဲ့ အနေအထားကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး ဒီဘင်္ဂလားတွေဟာ ပြည်ပမီဒီယာတွေကို စံနစ်တကျ ချဉ်းကပ်ကြိုးကိုင်ခဲ့ကြတယ်။
မျိုးစေ့မမှန်ပင်မသန်တဲ့ ပြည်ပမီဒီယာတွေဟာ ဒီရိုဟင်ဂျာဆိုတဲ့ ဘင်္ဂလားတွေကို ရခိုင်မြေမှာ ကျူးကျော်သူတွေလို့ မဖော်ပြဘဲ သနားစဖွယ် လူမမယ်တွေပုံစံ နှစ်ပေါက်အောင် ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။
အဲ့လို ဖော်ပြခဲ့ရာကနေ BBC World News အာရှ-ပစိဖိတ် ကဏ္ဍမှာ ရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ မြေပုံက လူမျိုးနေရာမှာ ဘင်္ဂလားတွေပုံကို ထည့်သွင်းဝါဒဖြန့်တဲ့အခါမှာ သမိုင်းအစဉ်အလာကြီးမားတဲ့ ရခိုင်တွေရော၊ လက်သည်းဆိတ်တော့လက်ထိပ်နာတဲ့ ကျန်တိုင်းရင်းသားတွေပါ ဆတ်ဆတ်ခါအောင်နာကြပြီး ဘီဘီစီ ဆန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုကြီး စတင်ခဲ့တော့တယ်။
အဲ့ဒီအချိန် အလုပ်နို်င်ဆုံးက တာဝန်မဲ့ ဘီဘီစီ မြန်မာပိုင်းမှာ သွားရောက် ပေါက်ကွဲကြခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ အဲ့သလို ပေါက်ကွဲကြတာကို အွန်လိုင်းမဂ္ဂဇင်းတွေ အင်္ဂလိပ်လိုရေးသားတဲ့ သတင်းတွေမှာ ဗမာနာမည်နဲ့ဆောင်းပါးရှင်တွေဟာ ဗမာတွေကိုပဲ အမြင်ကျဉ်းမြောင်းတဲ့ လူမျိုးဖြစ်သယောင်ယောင် ဖော်ပြခဲ့ကြတယ်။ ဘီဘီစီဖေ့စ်ဘုတ်မှာလည်း ဘီဘီစီက ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားတွေဟာ အကောင့်င်္အတုတွေဖွင့်ပြီး လူတကာမကြည့်ဝံ့တဲ့ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းခြင်းတွေကို တန်ပြန်တော်လှန်ရေးပုံစံလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဒီလှုပ်ရှားမှုကြီး အရှိန်တန့်သလို ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ဇာတိသွေးပြင်းထန်တဲ့ရခိုင်တွေဟာ ကိုးရီးယားနိုင်ငံ၊ ထိုင်းနိုင်ငံ၊ အမေရိကန်တို့မှာ ဘီဘီစီကို အကြီးအကျယ်ဆန္ဒပြခဲ့ကြတယ်။ ဒါတွေကို တစ်ညီတစ်ညွတ်တည်း ပြည်ပမီဒီယာအားလုံးက လျစ်လျူရှုခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါတွေကို ဒေါသပေါက်ကွဲတဲ့ မျိုးချစ်ရခိုင်တွေနဲ့ သွေးချင်း တိုင်းရင်းသားညီအစ်ကိုတွေကို အင်တာနက်ဖေ့စ်ဘွတ်မှာ စံနစ်တကျ ပစ်မှတ်ထား ဖြိုခွဲဖို့ ဘင်္ဂလားတွေ လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြပါတယ်။ Facebook အကောင်င့်္များကို ဟက်ခ်ခြင်း၊ခြိမ်းခြောက်သည့် မက်ဆေ့ခ်ျများပို့ခြင်း များကို စဉ်ဆက်မပြတ်လုပ်ဆောင်လာခဲ့ကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ Burma Democratic Concern လို့ခေါ်တဲ့ နိုင်ငံရေးတက်ကြွသူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က ရိုဟင်ဂျာအရေးမှာ ထိပ်တန်းက ပါဝင်စွက်ဖက်နေတဲ့ အင်္ဂလန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ်အိမ်နားမှာ ဆန္ဒပြလိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ နီးကပ်တိုက်ဆိုင်စွာပဲ လူသတ်မှု၊ မုဒိမ်းမှုကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။ နောက်ဆက်တွဲတွေကတော့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ထောင်နဲ့ချီတဲ့ ဘင်္ဂလားတွေ ဖျက်ဆီး၊ လုယက်နေတဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတကာစာဖတ်ပရိသတ်အတွက် ဧရာဝတီက မွတ်စလင်တွေကို ရဲကသေနတ်နဲ့ပစ်သတ်လို့သေတယ်ဆိုတဲ့ ပုံစံနဲ့ရေးလာပါတယ်။ အလားတူစွာ BBC World News,အိန္ဒိယက နယူးဒေလီသတင်းစာ၊ Channel News Asia သတင်းတို့က ချိုးချိုးနှိမ်နိမ်နဲ့ တစ်ကယ့် ကျူးကျော်သူ မိစ္ဆာတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ ရခိုင်တွေ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို ချိုးဖဲ့ဖော်ပြနေကြပြီဖြစ်တယ်။
နောက်ဆုံးကြားသိရတဲ့သတင်းအရ အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင် ၂ဝဝ ခန့် ထပ်မံဝင်ရောက်လာနေပြီး လောင်ချာတွေ ပါလာတယ်လို့ပြောတယ်။ အစိုးရစစ်ကြောင်းနဲ့ တိုက်ရိုက် ရင်ဆိုင်မိနေတယ်လို့ပြောတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ စံနစ်တကျ လုပ်ကြံခံနေရတာဖြစ်တယ်။ တစ်ဖက်က မီဒီယာနဲ့လုပ်ကြံတယ်။ တစ်ဖက်က အကြမ်းဖက်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ကျုပ်တို့ စည်းလုံးကြပါ။ တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် ကြက်တွေလို၊ တိရစ္ဆာန်တွေလို ကိုက်ခဲ ဟိန်းဟောက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။
ကျုပ် တတ်နိုင်သလောက် လုံးဝမနားဘဲဖြန့်ဝေနေတာ၊စာရေးနေတာ ၂၄ နာရီနီးပါးရှိပါပြီ။ တစ်ကယ့်ကို ငရဲဒုက္ခဆိုးကြီးနဲ့ ကြုံတွေ့နေရတဲ့ကျုပ်တို့ ညီအစ်ကို ရခိုင်တွေအတွက် စည်းလုံးကြပါ။ တစ်မိနစ်ပဲရရ ဒီလုပ်ကြံမှုကြီးတွေကို ကမ္ဘာသိအောင် အင်တာနက်အားကိုးနဲ့ ဖြန့်ဝေကြပါ။ လိုအပ်လို့ လက်နက်ကိုင်ရတဲ့ တပ်မတော်ကို စိတ်ဖြောင့်ဖြောင့်နဲ့ ရန်သူကို ရှင်းလင်းနိုင်အောင် အားပေးကြစေချင်တယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကျုပ်တိုိ့ကို အကွက်ကျကျ လုပ်ကြံနေတဲ့ ပြည်ပမီဒီယာအားလုံးကို စုပေါင်းအားနဲ့ တစ်ပြိုင်နက် သပိတ်မှောက်တော်လှန်ကြဖို့ အလေးအနက် တိုက်တွန်းချင်တယ်။
ကိုချစ်ရင်ထူးရေ . အောက်ဆုံးစာကျန်နေတာလေးပြင်လိုက်ပါဦး နော့်။
NGO များကလည်း ရိုဟင်ဂျာများကို ပံ့ပိုးနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ တကယ်လို့ ဒါသာတကယ် မှန်ခဲ့ရင် မြန်မာ့မြေပေါ်ကနေ အပြီးတိုင်သုတ်သင်ရမယ့်စာရင်းထဲ သူတို့ပါ တပ်တိုးလိုက်ပေတော့ဗျို့။ ရခိုင်ကို သွားကူမယ့်သူများရှိရင်လည်း သတင်းပေးကြပါ။ လိုက်ပါတိုက်ခိုက်ဖို့ အဆင်သင့်ပါပဲ။
ဘင်္ဂလားရိုဟင်ဂျာကိုဆန့်ကျင်တာ နိုင်ငံတွင်းကအစ္စလာန်ဘာသာဝင်တွေကိုဆန့်ကျင်တာမဟုတ်ပါဘူး…တောင်းပန်ပါတယ် ကျန်ခဲ့တာပါ
ဒီကိစ္စမှာ စစ်တပ်နဲ့ အစိုးရ တွန့်ဆုတ်မနေပါနဲ့။ အပြည့်အဝ ထောက်ခံပါတယ်။
ဘယ်မီဒီယာမှ ဂရုမစိုက်နဲ့။ ရိုဟင်ဂျာတွေကို မသတ်နိုင်ပဲ မျိုးချစ်တပ်မတော်လို့
ဘယ်တော့မှ မပြောပါနဲ့တော့။ ဒီအရေးအခင်းမှာ ကိုယ့်အမျိုးသားအပေါ် စော်ကားတဲ့ ကောင်တွေကို အသေသတ်ပေးပါ။ မျိုးချစ်တပ်မတော်လို့ ခေါ်ပါရစေ။
အမြန်ဆုံးသာ အကောင်အထည်ဖေါ်ကြပေးပါ တပ်မတော်ကြီးရေ
ကျနော်တို့ အားလုံးလဲ အမိတ နေကြရပါပြီ
ကျွန်တော် တို့လို လူက ပိုစ် အသစ်တင် ခွင့်မရလို့ ပြောချင်တာတွေ ဒီမှာဘဲရင်ဖွင့်လိုက်ရပါတယ်။ ကျွန်တော် အယူအဆ နဲ့ပြောရရင် ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်စနစ်တကျ လုပ်ကြံ ခံနေရတာပါ။ထောင်ချောက်ဆိုတာကို အရင်က စစ်အစိုးရကိုမုန်းတီးမှုနဲ့ သူတို့ ရဲ့အကြံအစည်များလားလို့ထင်မိတယ် ဒါပေမဲ့ တဖြေးဖြေး ဂွင်းဆက်တွေမိ လာတော့ ဒါတွေ ဟာရိုဟင်ဂျာတွေ အတွက် နောက်ကွယ်က စနစ်တကျကြိုးကိုင်လှုပ်ရှားသွားတာဖြစ်နိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ တွေ့ရတယ်။ဘယ်သူတွေဖြစ်နိုင်မလဲဆိုတော့ သူတို့ဘာသာဝင် အစွန်းရောက်တွေဘဲ။သေရင် အလာဆီရောက်မယ်ဆိုတဲ့ ဘာသာရေးမှိုင်းနဲ့ သူတို့ ဘာသာဝင်တွေကို ထိုးကြွေး ရခိုင်အမျိုးသားတွေကို ခုတုန်းလုပ်နဲ့ စနစ်တကျ စီစဉ်နေကြတာလို့မြင်ပါတယ် ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ထက်ထက်ခေါ် ရော်ရှီးနဲ့အပေါင်းအပါတွေ ကအားလုံးကို ၀န်ခံပြီး ရှေ့နေတောင်မခေါ်ချင်ဘူးဆိုလို့ တရားမျှတအောင် အစိုးရကဘဲထည့်ပေးရတယ်။ခုလောလောဆယ် သစ်ထူးလွင်မှာဖတ်လိုက်ရတာ ကတော့ ထက်ထက် သူ့ကိုယ်သူသေကြောင်းကြံသွားတယ်တဲ့။ မှန်ခဲ့မယ်ဆိုရင်သူက ဒီကိတ်စကိုစလုပ်ကထဲကသေလူလို့တွက်ထားပြီးသား။ဒါသူတို့ ဘာသာရေးမှိုင်းရဲ့ သားကောင်တွေပါ။ပထမတော့ တောင်ကုတ် အရေးကိတ်စမှာ ကိုယ့် ညီအကို ရခိုင်များလက်လွန်သွားတယ်လို့ထင်ရပေမဲ့ ဒီကိတ်စမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးသူတို့လူတွေကိုထိုးကြွေးခဲ့တယ်လို့ထင်ပါတယ်။စစ်တွေရဲစခန်းကိတ်စမှာဦးအောင်သန်းဝေ ကိုယ်တိုင်ကသူ ဘာမှ မဖြစ်ပါဘူးလို့ ပြောနေတာကို လက်မခံ ဘဲ ပြသနာတက်အောင်လုပ်ခဲ့ကြတယ်။သူတောင်းစား ရိုဟင်ဂျာတွေ လှုပ်ရှားလို့ရအောင် တဆင့်ခြင်းဖန်တီးသွားတယ်။ သူတို့ အင်အားအများဆုံး မောင်တော ကနေစလှုပ်ရှားတယ် အစိုးရပိုင်းက သူတို့ ရွှေ့တဲ့အကွက်ထဲ မ၀င်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးထိန်းသိမ်းကိုင်တွယ်နေတဲ့ကြားက ပြည် ပမီဒီယာတွေ နဲ့ သတင်းမှားတွေလွှင့် ပြီး ရိုဟင်ဂျာအရေး ကို တခြားတိုင်းပြည်တွေက အာရုံစိုက်လာအောင်လုပ်တယ်ကျွန်တော် ထင်တယ် သူတို့လိုချင်တာက ရိုဟင်ဂျာတွေကို အစိုးရက အကြမ်းဖက်နှိမ်နင်း တာ ဘဲ UNHCR ကို ပြချင်တာ သူတိုအကြမ်းဖက်လူမျိုးတုန်းသတ်ဖြတ်ခံနေ၇ပါတယ်ဆိုအော်ပြဖို့။ ဘာသာရေးမှိုင်းတိုက်ထားတဲ့လူတွေကိုထိုးကြွေးနေတာ။အဲ့ဒါတွေ ရမှ နိုင်ငံတကာဖိ အားနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအကာအကွယ် ယူ တိုင်းရင်းသားအဖြစ်လက်ခံ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ရေးတောင်း နိုင်ငံခွဲထွက် ဒါတွေက တဆင့်ချင်းတက်သွားမယ်ခို့ထင်ပါတယ်။သူတို ဘက်ချမ်းမှာ ဘင်းဂလားဒေရ် နောက်ခံရှိတယ်လေ။ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်နိုင်ငံဖြစ်သွားရင် အကြမ်းဖက်တွေအတွက် ခြေကုတ်ကောင်းတခုရပြီး တဆင့်ချင်း ကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်ဘက်ကိုထိပါးလာလို့လွယ်သွားဘီလေ။ မောင်တောမှာ အစိုးရရဲ့ လျှော့ပေါတဲ့ကိုင်တွယ်မှုကြောင့်သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာမရတဲ့အတွက် အခုစစ်တွေဘက်ထိ ဆက်လက်လှုပ်ရှားအကြမ်းဖက်နေကြဘီ ။ဘယ်လိုဆက်လုပ်ကြမလဲအစိုးရလဲသတိထားကိုင်တွယ်ရနေတယ်လို့ထင်တယ်။ဒီကိတ်စမှာ ပြည်တွင်းက မြန်မာ ပြည်ဖွား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် ရဲ့အခန်းကလဲအရေးကြီးပါတယ် သူတို့မပါဘဲ ဒီကိတ်စတွေမဖြစ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ အေးအေးချမ်းချမ်းနေချင်တဲ့ မြန်မာ ပြည်ဖွား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များလဲရှိမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ပြသနာတွေဆက်လက်ကြီးထွားလာမယ်ဆိုရင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲု့သူတွေလဲတနွယ်ငင်တစင်ပါ နှစ်ဖက်လုံး အထိနာပြီး သွေးချောင်းစီးနိုင်ပါတယ်။အခြေ အနေ ကိုမဆိုးချင်စေပါဘူး။ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ မြန်မာ ပြည်ဖွား အစ္စလာမ် ဘာသာဝင် များမဟုတ်ပါ ။ဒါပေမဲ့ အခြေအနေ အဆိုးဆုံးဖြစ်လာရင်ဘာဆင်ခြေ မှ မလိုပါဘူး။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ အတွက် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမှာ မြန်မာတိုင်းရင်းသား အားလုံးရဲ့ တာဝန်ပါ။ အဲ့ဒိ အခြေအနေရောက် လို့မှ နှောင့် နှေးတွေဝေ ရွှေ ရင်အေးတရားဟော နေ လို့ တခါ နယ်ချဲ့ကျွန်ဖြစ်ခဲ့ပီးဘီ ။ဒီတခါ ဘာသာကျွန်အဖြစ်မခံနိုင်ဘူးအမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို စော်ကားသူ တွေကိုအမြစ်ထုတ် မှ ပြတ်မယ်ဆိုရင် အကုန် ရှင်းးးးးးးးးးးးးးးးးးးးး………….
စံဖဲကိုခံချဲရင် ရန်ပွဲဟေ့ ။
မြန်မာပြည်ကို ချစ်သော၊ အချုပ်အခြာကို လေးစားသော၊ မြန်မာပြည်ကို အေးချမ်းစေချင်သောသူအားလုံး(ဘာသာ၊ လူမျိုး မခွဲခြားပါ) စုစည်းစွာဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအား စောင့်ရှောက်ရန် လိုအပ်နေပါပြီ။ ကျူးကျော်ရန်စနေသူများအကြောင်း မိမိတို့ပါတ်ဝင်းကျင်တွင်သာမက နိုင်ငံတကာကပါ သိရှိလာစေရန် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့။
မြန်မာနိုင်င်ငံကို သိမ်းပိုက်ဖို့ နယ်ချဲ့တွေဟာ စစ်ပွဲသုံးကြိမ်ဖန်တီးခဲ့တယ်။ အဲဒီ စစ်ပွဲတွေ ပေါ်ပေါက်လာဖို့ဘယ်လိုဖန်တီးခဲ့သလဲ ဆိုတာ သမိုင်းပြန်ဖတ်ကြည့်ရင်သိနိုင်ပါတယ်။ ဖော်ရွေလွန်းတဲ့၊ သည်းခံလွန်းတဲ့၊ အားနာလွန်းတဲ့ မြန်မာတွေသူ့ ကျွန်ဖြစ်ပြီး နယ်ချဲ့တွေရဲ့ အကွက်ကျကျယုတ်မာစွာနဲ့ စနစ်တကျအုပ်ချုပ်ခဲ့မှုကြောင့် ခုချိန်ထိ နိုင်ငံမှာ ယမ်းငွေ့ဝေခဲ့ရတယ်။
ယနေ့မြန်မာဟာ ဟိုး……အရင်ကလိုမအတော့ဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။
အပြတ်ရှင်းရမယ့်ဟာကို လုံးဝအမြစ်ဖြတ်ရမှာဘဲ။ ဒီနေ့၊ ဒီအချိန်မှာ ဒီဟာကိုမလုပ်ရင် နောင်မှာ ကျုပ်တို့ကို အသုံးမကျဘူးလို့ အပြစ်တင်မယ့် ကျုပ်တို့ရဲ့ သားဆက်တွေတောင် ကျန်မှာမဟုတ်ဘူး။
သမတ ကြိံး မိန့် ခွန်း ပြောပြိံး ရခိုင်ပြည်နယ် မှာ အရေးပေါ်အခြေ အနေ ကြေ ငြာ ပြိံး စစ်တပ် ဧ။် အကူ အညိံ ဖြင့် ထိန်းသိမ်း ရမယ်လို့ ကြေငြာချက် ထုတ်လိုက်ပါ ဘိံ။ စစ် တပ် က ခု မှ တရားဝင် ဝင်လာပါ ဘိံစောင့် ကြည့် ရ ဥိံးမှာပေါ့။
အမျိုး ဘာသာ သာသနာ ကို စော်ကားတဲ့သူ (အားလုံး)ငါ့ရန်သူ။
အူကြောင်ကြောင် သောက်တလွဲနဲ့မဟုတ်တာဖွသူ ငါ့ရန်သူ။
ငါ့ပြည်မှာနေ ငါ့တိုင်းရင်းသားစော်ကားသူ ငါ့ရန်သူ။
ဒါကတော့ ငါ့ သစ္စာအဓိဌာန်ပဲ။
မကြေနပ်လဲ ၆၀၀ ပေးဆဲတယ်၊ -ီးဘဲ ရှင်းတယ်နော်